Ejipta: Gaza No Lohateny Vaventy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2017 4:58 GMT
(Fanamarihana:lahatsoratra nivoaka tamin'ny Janoary 2008)
Ireto ireo lohateny vaventy farany tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Ejiptiana nilaza ny fahorian'ireo Palestiniana ao Gaza. Nampitakizina an'i Gaza tao anaty haizina ny fahirano nataon'i Israely an'i Gaza, ary niteraka antso iraisampirenena sy hatezerana teny amin'ny arabe Arabo mba hampitsaharana ny fandripahana.
Koa satria tsy hita intsony izay hambara ary efa nilaza ny feony ireo bilaogera avy ao amn'ny faritra, dia ho fohy ny teniko ary ho entiko ho anareo ireo lohateny vaventy avy amin'ny tontolon'ny bilaogy Ejiptiana.
Watany, manoratra lahatsoratra iray nomeny lohateny hoe: “Mifady hanina mandra-pamaranan-dry zareo ny fahirano ataony an'i Gaza.”
Lesani moltofy, miresaka momba ny ankizivavy kely iray izay nandefa imailaka taminy avy any Gaza ary manoratra hoe : “Andraso mandra-pahafatinay izahay”
Ary ny Mowaten mat-hoon manontany – taorian'ny nandefasany sarim-pandripahana mahatsiravina: “Aiza ireo hetsika nasionaly, taorian'ny nahafatesan'ilay iray ofisialy.”
Mandritra izany, manoratra i Zeinobia ao amin'ny bilaoginy hoe “Handrehitra lahinjiro ho an'i Gaza”: “Henatra ho an'i Ejipta izay mbola mikatona daholo ny sisintaniny. Tsia. Tsy henatra ho an'i Ejipta, fa ho an'ny Filoha Ejiptiana.”
Raha i Bent Masrya indray ao amin'ny lahatsorany, mitondra ny lohateny hoe “Ento aho hiaraka aminao ho any Gaza”, dia lany voambolana saingy mandefa rohy vitsivitsy milaza ny fomba fijeriny.
Ana Ikhwan manoratra lahatsoratra iray mitondra lohateny hoe: “Ny haizin'ireo mpamono olona ary tsy misy fialantsiny na ho an'iza na ho an'iza.”
Ary ny Morakeb Masry maneho ny fijeriny amin'ny lohateny vaventy hoe “Mirehitra ao anatin'ny haizina i Gaza.. Ilay tsy matahotra an'Andriamanitra ireto.”
Ny farany nefa tsy ny kely indrindra, manoratra ny Erham Demaghak , ao anaty lahatsoratra faran'izay fohy saingy tena mafonja : “Amin'ny valo eto amin'ny Hopitaly El Shifa, ho alefa ny vondrom-pihary herinaratra fanao vonjitaitra, mba hanemorana ora vitsivitsy ny fotoam-pahafatesan'ireo izay ao amin'ny toerana fikarakarana mafy/manokana.”
الساعة الثامنة ستعمل المولدات البديلة في مستشفى الشفاء، لتؤخر موت من هم بالعناية المركزة لساعات أخرى..